Ị nọ ebe a: Mbido > Nchịkọta ego na ihe omume > Virtual Virgin Money na London Marathon 2021
Ego Nwanyị Virtual
Bụrụ akụkụ nke nnukwu London Marathon na akụkọ ihe mere eme ma gbanwee ndụ nke
Mgbe ole: Sọnde 3 October 2021
ebe: ebe ọ bụla masịrị gị, ọ bụrụ na ị pụọ n’èzí
Ego nbanye: £ 10
Nweta ego: £ 350
Jikọọ Team BLG Mind na Sọnde 3 Ọktoba 2021 ma bụrụ akụkụ nke agbụrụ kachasị mma nke UK - ebe ọ bụla ị nọ!
Anyị na-enye gị ohere ibido marathon kasị ukwuu n'ụwa n'ụzọ gị! Nwere ike ịga ije, gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa ọsọ 26.2 na mpaghara gị, na-ewere ọtụtụ nkwụsịtụ ka ịchọrọ, wee rite nrite mara mma London Marathon na T-shirt. Naanị iwu bụ na ị ga-emerịrị kilomita gị n'etiti 00:00:00 na 23:59:59 na Sọnde 3 Ọktoba 2021, ma ị ga-emerịrị ha n'èzí.
Chebe ọnọdụ gị n'akụkọ ihe mere eme
Site na ndị ọgba ọsọ 50,000 na-ekere òkè na Marathon nke ọma na London na 50,000 na-esonye n'ọsọ ọdịnala na London, site na-agba ọsọ maka BLG Mind, ị ga-abụ akụkụ nke ihe omume akụkọ ihe mere eme: onye mbụ maratọn 100,000! Kedu ihe ọzọ, nkwado gị ga-apụta na anyị nwere ike ịga n'ihu ịnọnyere ndị obodo ahụ metụtara nsogbu ahụike ọgụgụ isi ma ọ bụ mgbaka.
Na-agba ọsọ maka BLG Mind
Anyị nwere Atọ mebere ebe maka 2021 Virtual Virgin Money London Marathon. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgba ọsọ maka anyị, biko mezue ụdị dị n'okpuru, na-ekwenye ịkwụ ụgwọ ndebanye ndebanye 10 ma kwe nkwa ibuli opekempe nke £ 350 na nkwado ma ọ bụrụ na ịhọrọ.
Ready nweela ebe?
Ọ bụrụ n’inwere ebe nke gị maka Marathon 2021 Virgin Money London ma ịchọrọ ịgbara ọsọ maka BLG Mind, ị nọ n’ebe kwesịrị ekwesị! Kpọọ onye njikwa ego anyị na 07764 967925 ma ọ bụ email fundraising@blgmind.org.uk isonyere #TeamBLGMind.
Ihe ị nwetara
* Ihe mmeri London Mara mma na T-shirt si onye nhazi ihe omume
* BLG Mind na-agba ọsọ uwe
* Atụmatụ ego, echiche na nkwado sitere na otu ndị na-eweta ego BLG Mind
* Ebe n'ime akwụkwọ akụkọ ihe mere eme
Egbula oge - chebe ọnọdụ gị ugbu a
Debe m aka
Nkọwa kọntaktị gị
Aha mbụ (chọrọ)
Aha nna (chọrọ)
Ofbọchị ọmụmụ gị (achọrọ - ndị chọrọ ịbanye ga-abụ afọ 18 ma ọ bụ karịa na 3 October 2021)
Email gị (achọrọ - anyị ga-eji email gị iji kpọtụrụ ebe Virtual Marathon ebe gị)
Adreesị Line One (chọrọ)
Adreesị Line Abụọ
Ahịrị Adreesị Atọ
Post Code (chọrọ)
Anyị ga-achọ izitere gị uwe ojii BLG Mind na-agba ọsọ mgbe ego ịchụ ego gị ruru £ 100
Ve nwere uwe ojii na-agba ọsọ BLG Mind?
Ee, M ga-achọ uwe ojii na-agba ọsọ BLG Mind Mba, anaghị m achọ uwe ejiji BLG Mind
You ga na-agba ọsọ na-echeta onye?
Kedu ka ị si nụ banyere ebe anyị na-eme Marathon Virtual?
elekọta mmadụ mediaWeebụsaịtịNdị enyi na ezinụlọEjirila ọrụ nlekọta ahụike ọgụgụ isi BLGEjirila ọrụ mgbaka BLG MindNdị ọzọ
You na-ekwe nkwa ibuli opekempe nke £ 350 maka uche BLG?
Ee, m kwere nkwa iweta opekempe nke £ 350 maka BLG Mind.
M na-agụ na-ekweta na usoro na ọnọdụ nke ntinye.
Agụọla m ma kwenye usoro na ọnọdụ nnabata
Daalụ maka ịhọrọ ịkwado anyị
Anyị ga-achọ ịme ka ị mata etu nkwado gị si agbanwe ndụ na ụzọ ndị ọzọ ị nwere ike isi tinye aka site na nchịkọta ego, mmemme na ọrụ afọ ofufo. Biko mee ka anyị mata otu ị ga-enwe obi anụ ịnụ n'ọnụ anyị.
email Ozi ederede ekwentị
Anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị site na nzipu, belụsọ na ị gwara anyị ka anyị ghara. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe ụzọ ị nụrụ n’ọnụ anyị, kpọtụrụ fundraising@blgmind.org.uk. Iji hụ otu anyị si eji ma chebe ozi gị ị nwere ike ịlele nke anyị amụma nzuzo
NB: Site na ịdenye aha isonye na 2021 Virtual Virgin Money London Marathon maka BLG Mind, ị kwenyere ịkwụ ụgwọ ndebanye ndebanye £ 10 wee bulie opekata mpe nke £ 350 na nkwado ma ọ bụrụ na ịhọrọ. Ebe dị n'okpuru nnweta. Ozugbo anyị natara akwụkwọ gị, anyị ga-ezitere gị email ka ị mara ma ọ bụrụ na ị nwere ebe, ma nye nkọwa gbasara otu esi akwụ ụgwọ ndebanye ndebanye £ 10.
The 2021 Virtual Virgin London Marathon: ozi dị mkpa
Ndị nbanye ga-abụ 18 ma ọ bụ karịa na Sọnde 3 Ọktoba 2021
A ga-agwụcha kilomita 26.2 niile na Sọnde 3 Ọktoba 2021
Emere 2021 Virgin Money London Marathon mebere emeghị n'okporo ụzọ emechiri emechi
Ndi sonyere kwesiri ileba anya na ochichi ndi ochichi di ugbu a banyere ndi mmadu na ndi mmadu n’oge ihe omume a
Ihe onyinye a nke 2021 Virgin Money London Marathon, nke kwadoro site na TCS, choro ka onye sonyere mee ka GPS soro uzo 26.2 ha.
A ga-eji ozi nyocha iji mepụta akwụkwọ nke ọ bụla pụrụ iche na onye so na ya
Ndị na-agba ọsọ na-ahụ maka ihe oriri na mmiri ha onwe ha n'oge mmemme ahụ
A ga-agwa ndị niile sonyere ka ha bulite ihe akaebe nke oge ha ma a ga-ebipụta nsonaazụ gọọmentị
Gị Egwuregwu London weebụsaịtị maka ndepụta zuru ezu nke Ajụjụ maka ndị sonyere